Photoshop နဲ့ Illustrator ကို မြန်မာလိုသင်မယ် ( 1 ) ~ ရငဲသား
လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများကို ( ရငဲသား ) မှကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း... Home
Photoshop နဲ့ Illustrator ကို မြန်မာလိုသင်မယ် ( 1 )
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Chapter-3-03Open multi images-(Image များကိုဖွင့်ခြင်း) Open multi images-(Image များကိုဖွင့်ခြင်း)Length: ‎3:40Like · Comment · Thursday at 11:01pm · Van Lal Vena and Aungthan Oo like this.
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Chapter-3-02Open Command-(File Menu တဲက Open ဖွင့်ခြ��... Open Command-(File Menu တဲက Open ဖွင့်ခြင်း)Length: ‎2:20Like · Comment · Thursday at 10:24pm · Van Lal Vena likes this.
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Chapter-3-01Fundamentals-(Photoshop အခြေခံမှလေ့လ��... Fundamentals-(Photoshop အခြေခံမှလေ့လာခြင်း)Length: ‎2:05Like · Comment · Thursday at 10:16pm · Van Lal Vena and Aungthan Oo like this.
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Chapter-2-08Reset preferences-(ပြန်လည် Reset လုပ်ေ... Reset preferences-(Photoshop တွင် မိမိတို့ Setting လုပ်ထားတဲ့ Preferences, Panel အစရှိတာတွေက Program ဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ထို့အခါ ပြန်လည် Reset လုပ်ပေးခြင်း )Length: ‎4:25Like · Comment · November 21 at 8:32am · Van Lal Vena and Aungthan Oo like this.
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Chapter-2-07Setting supdate workspace(မိမိတို့ Working Are... Setting supdate workspace(မိမိတို့ Working Area ကို အလိုရှိရာ Panel နှင့် Update လုပ်ဆောင်ခြင်း)Length: ‎3:31Like · Comment · November 21 at 8:30am · Van Lal Vena likes this.
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Chapter-2-05Create save workspace-(Work space တွေကို Save လ�... Create save workspace-(Work space တွေကို မိမိစိတ်ကြိုတ် ဖန်တီးပြီး Save လုပ်ဆောင်းခြင်း)Length: ‎4:24Like · Comment · November 21 at 8:21am · Van Lal Vena and Aungthan Oo like this.
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Chapter-2-04Photoshop interface-(တစ်ခုနှင့်တစ်��... Photoshop interface-(Interface ဆိုသည်မှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်ပေးသော)Length: ‎4:29Like · Comment · November 20 at 10:58pm · Van Lal Vena likes this.
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်File Preferences-(Preferences ထဲတွင် File ကိစ္စကို Setting ပြုလုပ်ခြင်း) — with Nyinyi Htwe.File Preferences-(Preferences ထဲတွင် File ကိ��... Length: ‎4:26Like · Comment · June 8 at 4:58am · Van Lal Vena likes this.
Adobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန် Chapter-2-03-June 8 at 5:09am
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Paste board color-(Paste board color တွေကိုအရောင်ပြောင်းခြင်း) — with Nyinyi Htwe.Paste board color-(Paste board color တွေကိုအေ�... Length: ‎3:34Like · Comment · June 8 at 4:50am · Van Lal Vena likes this.
Adobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန် Chapter-2-02-June 8 at 5:01am · 1Loading...
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်General preferences-(အရေးကြီးတဲ့ Preferences တွေကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း) — with Nyinyi Htwe.General preferences-(အရေးကြီးတဲ့ Prefere... Length: ‎2:10Like · Comment · June 8 at 4:43am · Van Lal Vena likes this.
Adobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန် Chapter-2-01-June 8 at 4:50am
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Colors explained-(Setting လုပ်ပြီး Color ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း) — with Nyinyi Htwe.Colors explained-(Setting လုပ်ပြီး Color က��... Length: ‎2:40Like · Comment · June 8 at 4:33am · Van Lal Vena likes this.
Adobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန် Chapter-1-04-June 8 at 4:45am
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Install color settings-(Color အရောင်ကိစ္စကို Setting ပြုလုပ်ခြင်း) — with Nyinyi Htwe.Install color settings-(Color အရောင်ကိစ္စ��... Length: ‎1:25Like · Comment · June 8 at 4:25am · Van Lal Vena likes this.
Adobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန် Chapter-1-03-June 8 at 4:32am
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်Install Custom Keys-(Custom Keys Keyboard Shortcut များကိုတည့်သွင်းခြင်း) — with Nyinyi Htwe.Install Custom Keys-(Custom Keys Keyboard Shortcut မျာ��... Length: ‎3:22Like · Comment · June 8 at 4:19am · Van Lal Vena likes this.
Adobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန် Chapter-1-02-June 8 at 4:31am
RECENT ACTIVITYAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန် edited their Website and Location.
Adobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန် changed their Email.
Report/Mark as SpamAdobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်PSD as default-(Photoshop default file များဖြစ်ကြတဲ့ JGEG,TIF,PSD ဖွင့်၍အသုံးပြုခြင်း) — with Nyinyi Htwe.PSD as default-(Photoshop default file များဖြစ��... Length: ‎3:20Like · Comment · June 8 at 3:57am · Van Lal Vena likes this.
Adobe Photoshop CS5 သင်ခန်းစာ မြန်မာဘာသာပြန် Chapter-1-01-June 8 at 4:21am
Free download ဆွဲနိုင်တဲ့ မြန်မာစာအုပ်တွေ လိုချင်တဲ့သူများအတွက်
သူငယ်ချင်းများ အားလုံးမင်္ဂလာပါ... ကျွန်တော် တစ်နေ့က Free download ဆွဲလို့ရတဲ့...
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာသီချင်းများ ယူကြမလား
Myanmar Mp3 Album ဆိုလားတော့မသိဘူး ဒီမှာဝင်ယူလိုက်
♥ ဖူးစာရှင်လေး♥မှဖတ်ရှူ့စရာ "မြန်မာ ebook များ"
http://www.nyinaymin.org Window7အသုံးပြုနည်းလက်စွဲ (မြန်မာလို) ဒါကတော့ window7အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ပါ. အရင်က တင်ပေး ထားပြီးသားပါ. လင့်ေ...
““ ဘဝတစ်ကွေ့”” - [Mp3 - Album Download] ကောင်းကောင်း၊ မြင့်မြတ်၊ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်
Posted by ♦ပါရမီဖြည့်ဘက်လေး♦ on December 22, 2012 at 9:58pm in ♪ သီချင်းများ ♪♫.DownLoad.♪♫ အီးမေးလ်ပို့ မယ် View Discussions ကောင...
Video တွေကို.. 3D ပြောင်းမယ့် Aiseesoft 3d Converter.6.3.12 +Patch
Posted by Kelvin on December 25, 2012 at 1:21pm Send Message View Blog သူကတော့...ရိုးရိုး 2D ...
ငွေ10 သိန်းရမည့် နှင်းဆီ တစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်
New Gmail Tabs လုပ်နည်းကလေးပါ။
Window 8 မြန်မာဖောင့်ထည့်လို့ ရပြီး ၊ လက်ကွက် မရဘူးဆိုရင်လုပ်နည်း
QuickTime Pro 7.74.80.86 Full with serial key
ကီးကီး on Minus.com
Gmail အကောင့် အသစ် မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်ရအောင် .. ( ...
မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook အမြောက်အများ ဒေါင်းလိုပ...
Internet.Download.Manager နှင့် ကွန်ပျူတာမျက်နှာတွ...
Photoshop ဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနည်း(၂)
Big Bag ရဲ့ ..One Eleven သီချင်း စာအုပ်..(jpg form...
★ ကွန်ပျူတာ Screen နှင့် လိုချင်တာလေးတွေကို ဓါတ်ပံ...
Photoshop နဲ့ Illustrator ကို မြန်မာလိုသင်မယ် (2...
Photoshop နဲ့ Illustrator ကို မြန်မာလိုသင်မယ် ( 1 ...
Skype အကောင့် တစ်ခုဖြင့် ဖုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာ နှစ်...
DJ ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ.သူငယ်ချင်းများအတွက် software နဲ...
Google account အခိုးခံလိုက်ရရင်???
Football Manager 2012-SKIDROW + v12.0.4 UPDATE + C...
Gmail ပို့ပြီးသား ပြန်ဖျက်နည်း
photoshop basic lesson 1 (လိုချင်သည့်အစိတ်အပိုင်းက...
Photoshop ဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနည်း(၁)
Window7မှာရှိတဲ့ ဖိုတာလေးတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုး...
SuperRam သုံးပြီး Computer Performance Boost လုပ်န...
mp3,mp4 ဖိုင်တွေကို ထပ်ချုံ့ပေးမယ့် ဆော့ဝဲလ်(ချုံ့...
Virus အကြောင်းလေးပါ။Virus ဆိုတာဘာလဲ.....? (What is...
Internet ပေါ်က Computer တစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် Cloud Com...
Nero 11 : Download Nero 11 For Freeနှင့်စီဒီ၊ ဒီ...
ကွန်ပျူတာ၌မြန်မာစာသုံး လင်းနစ် OS ယနေ့ထွက်ပြီး
Mozilla Firefox ကိုမြန်မာလိုမြင်အောင်လုပ်မယ်.........
Google မှာ ပုံတူရှာမယ်။
Firefox 8 Available to Download!
Gtalk တွင် ရေဒီယိုထည့်သွင်းခြင်း
မိမိ Profile ပုံကို Effect နဲ့ပြင်နည်း
IT လူငယ်များ မှတစ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ဖော်ပြပါသည်၊
online myanmar dictionary
window password killer
Copyright © ရငဲသား | Powered by Blogger